Cunnooyinka la barto oo maskaxdaadu ka dhigto mid ku shaqeeya awood buuxda | Ragga Stylish
Cunto la barto
Ma ogtahay inay jiraan cunnooyin si fiican loo barto? Marka ay tahay inaad jilba joogsato wajiga imtixaanka ama imtixaanka, cuntada badanaa waxay qaadataa kursiga dambe. Si kastaba ha noqotee, inaad si xun wax u cunto ama aad si toos ah wax uga cuntid calool madhan ma aha fikrad fiican. Xulashada cuntada ee aad sameysid inta aad wax baranaysid waxay si weyn uga caawin kartaa maskaxdaada inay isku koobto dhammaan macluumaadka ku jira buugaagta.
Cunnooyinka qaarkood waxay siiyaan kor u qaadista tamarta maskaxda, oo ka dhigaysa mid soo jeeda, diirada saaraya oo diyaar u ah inay ku shaqeyso karti buuxda inta lagu gudajiro cashar dheer.
1 Cunnooyinka ugu fiican ee la barto
1.2 Shaah cagaaran
1.3 Ismaris qamadi dhan
1.5 Ma fiirsashada kugu filan?
1.6 Miro guduud
2 Ereyga ugu dambeeya
Cunnooyinka ugu fiican ee la barto
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in la hubiyo qiyaas wanaagsan oo nafaqooyin ah dhammaan cuntooyinka, maaddaama cunno xumo aysan faa'iido u lahayn waxqabad kasta oo jirka ah, oo ay ku jiraan kuwa ay garaacday maskaxdu. Laakiin dhammaan cuntooyinka caafimaad iyo nafaqada leh ee inta badan horay u yaqaannay, waxaan ka helnay qaar u taagan faa'iidooyinkooda maskaxda iyo daraasadaha. Sidaa awgeed, haddii ay tahay inaad jilbaha suxulkaaga dhigato, waa inaad ku ag haysataa cuntooyinka soo socda:
Qaxwada waa cunno caadi ah oo lagu barto laguna baraarujiyo maskaxda guud ahaan. Cabitaankani wuxuu shidaal u yahay maskaxdaada wuxuuna kaa caawin karaa inaad waxbadan barato oo aad ka sii fiicnaato. Dhanka kale, waa in lagu xisaabtamo in saameynteeda ay tahay mid kumeelgaar ah oo aan lagugula talin inaad raadiso raad midba mid kale markasta oo ay bilaabaan inay baaba'aan. Waxaa lagugula talinayaa inaadan ka badnaan 2-3 koob maalintii (xadgudubku wuxuu noqon karaa mid waxyeello leh, wuxuu kaa hor istaagayaa inaad si cad u fikirto), markaa si dhexdhexaad ah u qaado oo waqtiyada si wanaagsan u door.
Haddii aad raadineyso beddelka kaafiga ee barashada, tixgeli shaaha cagaaran. Caan ku ah fiirsashada sare ee antioxidants, shaaha cagaaran wuxuu sidoo kale saaxiib la noqon karaa howlaha maskaxda. Jaahwareerka ayaa caqabad weyn ku ah fadhiyada daraasadda iyo, sida lagu sheegay cilmi baaris, cabitaankan caafimaadka leh ayaa kaa caawin kara inaad feejignaato.
Ismaris qamadi dhan
Maskaxdu waxay ubaahantahay tamar ay wax kubarto, karbohaydraytyada isku dhafanna waa ikhtiyaar wanaagsan oo tamartaas lagu helo. Hadday gaajo kugu dhacdo, tixgeli rooti rooti dhan oo sarreen ah oo ay weheliso casiir liin macaan si aad xoogga saartid oo aad uhesho tamar maskaxeed kulamadaada waxbarasho. Dhinaceeda, baastada qamadiga oo dhan waa ikhtiyaar aad u fiican cuntada, laakiin qaybo ka mid ah xakamee haddii kale waxaad dareemi doontaa culeys badan oo waxaad lumin doontaa xawaaraha maskaxda. Sidaa awgeed, sida kafeega, karbohaydraytyadu waxay noqon karaan xulafadaada, laakiin kaliya qiyaas sax ah.
Haddii aadan aqoon waxa aad ku buuxinayso sandwich-ka, salmon ayaa mudan in laga fiirsado sababo badan awgood. Hantidaada ku jirta Omega 3 acids acids fat waxay faa iido u leedahay awooda maskaxda, fiirsashada iyo fiirsashada, waxyaabaha door muhiim ah ka qaata isku-darka macluumaadka ka muuqda buugaagta. Intaa waxaa dheer, waxay siisaa nafaqooyin kale oo maskaxdaadu u baahan tahay, sida fiitamiinnada B iyo selenium. Marka la soo koobo, mid ka mid ah cuntooyinka ugu dhameystiran ee la barto. Hadana haddii aadan ahayn taageere salmon, ha welwelin, maxaa yeelay waxaa jira kalluun kale oo hodan ku ah omega 3. Dabcan, iyagu sidaa uma la jaan qaadi doonaan sandwiches-kaaga ... ama waxaa laga yaabaa inaad soo afjarto waxyaabo cusub oo dhadhan fiican leh.
Ma fiirsashada kugu filan?
Fiiri maqaalka: Sida loo wanaajiyo feejignaanta. Halkaas waxaad ka heli doontaa tilmaamo iyo tabaha badan si aad u kordhiso awooddaada inaad xoogga saarto.
Awooddeeda antioxidant-ka sare waa faa'iido u leh xusuusta iyo awoodda garashadaSidaa darteed ku haysashada buluug-buluug marka aad wax baraneyso waa fikrad wanaagsan, gaar ahaan marka la barbar dhigo cunnooyinka fudud ee caadiga ah ee warshadaha, kuwaas oo aan lahayn qiimo nafaqo oo aad u yar.
Adiga oo maskaxdaadu soo jeedo oo ay diyaar u tahay inay xafiddo tan macluumaad ah ayaa aad muhiim u ah inaad ka faa'iideysato daqiiqad kasta oo kulan daraasadeed ah Iyo isbinaajka ayaa kaa caawin kara inaad labadaba sameyso iyada oo ay ugu wacan tahay duritaanka folic acid, oo ah xulaf xiiso leh nidaamka neerfaha. Broccoli waa qudaar kale oo weyn oo wax ku barta labada caafimaad iyo caafimaad ahaanba. Guud ahaan, dhammaan miraha iyo khudradda midabkeedu mugdi yahay waxay ku wanaagsan yihiin in la barto..
Boorashku waa ikhtiyaar aad u fiican quraacda, gaar ahaan waqtiyada baahida maskaxeed ee sarraysamaadaama ay yihiin il tamar oo waarta.
Inkasta oo cuntooyinka kor ku xusan ay kaa caawin karaan waqtiyada daraasadda iyo guud ahaan baahida maskaxda sare, taasi waa in la yiraahdo daqiiqado gaar ah, waxa ugu fiican, dabiici ahaan, waa in la ilaaliyo cunto kala duwan oo caafimaad leh. Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah inaadan ka boodin wax cunto ah (gaar ahaan quraacda) ama neerfahaaga ayaa ogaan doona.
Sidoo kale hubi inaad siiso maskaxda fursad ay ku nasato ugana soo kabato dadaalkii si aad u wajahdo maalin cusub oo waxbarasho ah oo dammaanad leh. Sida kaliya ee lagu sameyn karaa waa hurdo inta u dhexeysa 7 iyo 8 saacadood maalintii.
Uma baahnid inaad cuntid dhammaan cuntooyinkan maalinta imtixaankaTaabadalkeed, haddii aad si fiican maskaxdaada u siinaysay maskaxdaada, cunto caafimaad leh, oo fudud iyo laga yaabee koob bun ah ama shaah ah ayaa kugu filan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cunto la barto
Cunto soodhiyam ah oo yar
Cawaaqibta cunno xumo